I-Hotjar: Ama-Heatmaps, ama-Funnel, okuqoshiwe, ama-Analytics nempendulo | Martech Zone
I-Hotjar: Ama-Heatmaps, ama-Funnel, okuqoshiwe, ama-Analytics nempendulo
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 27, 2016 NgoMgqibelo, July 8, 2017 Douglas Karr
Hotjar inikeza isethi ephelele yamathuluzi wokulinganisa, ukuqopha, ukuqapha nokuqoqa impendulo ngewebhusayithi yakho ngephakeji elilodwa elingabizi. Ihluke kakhulu kwezinye izixazululo, i-Hotjar inikeza izinhlelo ngezinhlelo ezilula ezingabizi lapho izinhlangano zikwazi khona ukudala ukuqonda ku inani elingenamkhawulo lamawebhusayithi - futhi wenze lokhu kutholakale ku- inani elingenamkhawulo labasebenzisi.
Ukuhlolwa kweHotjar Analytics Faka
Amamephu okushisa - Ukunikeza ukumelwa okubonakalayo kokuchofoza kwabasebenzisi bakho, ompompi nokuziphatha kokuskrola.
Ukurekhodwa kwezivakashi - Qopha ukuziphatha kwezivakashi kusayithi lakho. Ngokubona izivakashi zakho, ukuchofoza, ukuthepha, ukunyakaza kwegundane ungabona izingqinamba zokusebenziseka ku-ﬂ y.
Imijondolo Yokuguqulwa - khomba ukuthi yiliphi ikhasi futhi ngasiphi isinyathelo izivakashi eziningi ezishiya ukuhlanganyela kwazo nomkhiqizo wakho.
I-Form Analytics - Thuthukisa amazinga wokugcwaliswa kwamafomu aku-inthanethi ngokuthola ukuthi iziphi izinkambu ezithatha isikhathi eside ukugcwaliswa, ezisele zingenalutho, nokuthi kungani izivakashi zakho zishiya ifomu nekhasi lakho.
Ama-Polls Polls - Thuthukisa ulwazi lwakho lwewebhusayithi ngokubuza izivakashi ukuthi zifunani nokuthi yini ezivimbela ukuthi zikufinyelele. Imibuzo eqondisiwe kuzivakashi ezithile noma yikuphi kuwebhu yakho nakwisayithi leselula.
Surveys - Yakha ucwaningo lwakho olusabelayo usebenzisa umhleli olula. Qoqa izimpendulo ngesikhathi sangempela kusuka kunoma iyiphi idivayisi. Sabalalisa ucwaningo lwakho usebenzisa izixhumanisi zewebhu, ama-imeyili noma mema izivakashi zakho ngaphambi nje kokuba zilahle isiza sakho ukuze ziveze ukuphikisa noma ukukhathazeka kwazo.
Funa Abahloli Bomsebenzisi - Funa abahlanganyeli ocwaningweni lomsebenzisi nokuhlolwa ngqo kusuka kusayithi lakho. Qoqa imininingwane yokuphrinta, imininingwane yokuxhumana bese unikela ngesipho ukuze uthole usizo lwabo.
Bhalisela Isivivinyo Samahhala se-Hotjar
I-Hotjar incoma le nqubo yezinyathelo eziyi-9 yokwenza ngcono isipiliyoni sakho sekhasimende nokuguqulwa.
Setha i- I-Heatmap kumthamo omkhulu kanye namakhasi aphezulu wokufika.
Thola 'Abashayeli' nge Ama-Polls Polls emakhasini aphezulu okufika kwezimoto.
Survey abasebenzisi / amakhasimende akho akhona nge-imeyili.
Setha i- Funnel ukukhomba Izithiyo ezinkulu zesayithi lakho.
Setha Ama-Polls Polls emakhasini e-Barrier.
Setha Amamephu okushisa emakhasini e-Barrier.
Sebenzisa Ukudlala Kwezivakashi ukuphinda udlale izikhathi lapho izivakashi ziphuma khona emakhasini e-Barrier.
Qasha Abahloli Bomsebenzisi ukudalula Abashayeli nokubona Izithiyo.
Reveal 'Hooks' nge Inhlolovo Yempendulo emakhasini akho empumelelo.
Tags: ukuhlaziywa kwefaneli yokuguqulaimingcele yokuguqulwaimephu yokushisaukwakheka kokushisaimephu zokushisahotjarukurekhoda komsebenzisiukuqoshwa kwezivakashiithuluzi lokuhlola izivakashiucwaningo lwezivakashi
Finyelela ku-7: Bandakanya izethameli zezilimi eziningi kuma-Social Media
Izici Eziyinhloko Ezingu-20 Ezithinta Ukuziphatha Kwabathengi be-E-Commerce